अमेजन निलम्बन अपील: चीजहरु अमेजन विक्रेता निलम्बन पछि गर्न को लागी
अमेजन अपील सेवा
अमेजन सस्पेंशन अपील
अमेजन विक्रेता निलम्बन रोकथाम
खाता स्वास्थ्य जाँच
अमेजन विक्रेताहरूको बिक्री बढावा
अमेजन विक्रेता खाता निलम्बन पछि के नगर्नुहोस्
अनलाइन विक्रेताको लागि अमेजन पवित्र मेक्का हो। र, यो ग्राहकहरु को लागी उस्तै जान्छ। त्यहाँ यति धेरै फरक कोटीहरू र उत्पादनहरू छन् जुन एकले खरीद गर्न सक्दछ। जे होस्, प्लेटफार्ममा विक्रेताको बढ्दो संख्याको साथ महान उत्पादहरू प्रदान गर्दै, अमेजन निलम्बन अपीलहरूको संख्या पनि बढ्यो।
यो भयो किनकि प्लेटफर्ममा उत्पादनहरूको गुणस्तर घट्यो र दुखी ग्राहकहरूको संख्या बढ्यो। यो सुनिश्चित गर्न कि अमेजन ग्राहकहरूले राम्रो सामान अनलाइन पाउनेछन्, अमेजनले गुणवत्ता बेच्नेहरू कोशिस गर्दछ। अमेजन प्लेटफर्ममा विक्रेताहरु माथि नीतिहरु लादेर यो गर्छ। र, यदि यो उनीहरू द्वारा ठीक खेलेको छैन भने तिनीहरूले तिनीहरूको खाता निलम्बन गर्छन्। यो सामान्य घटना हो र हामी त्यस्तो कम्पनी हौं जसले मानिसहरूलाई यस्तो खाँचोमा मद्दत गर्छन्।
जे होस्, यदि तपाईं यस विषयमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईंलाई अमेजन निलम्बन अपीलको बारेमा तल पढ्न सल्लाह दिनेछु, र कसरी निलम्बित विक्रेता खाताहरू हामी मानिसहरूलाई मद्दत गर्दछौं।
अमेजन खाता निलम्बन को मतलब के हो?
बढ्दो संख्याको साथ, अमेजन विक्रेता निलम्बनको अधिक र अधिक घटनाहरू भएका छन्। आदर्श रूपमा, त्यहाँ तीन सर्तहरू हुन सक्छन् जसको माध्यमबाट अमेजन विक्रेतामा जानुपर्दछ। यी हुन्:
निलम्बन: यदि तपाईंको खाता निलम्बित छ भने यसको मतलब तपाईं अमेजन निलम्बन अपील बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको पक्कै पनि यसको मतलब तपाईले कार्यको योजनाको साथ आउनु पर्छ।
अस्वीकृत: यसको मतलब विक्रेताले एक अमेजन निलम्बन अपील गर्यो तर यो अधिकारबाट यसलाई अस्वीकार गरियो। यस अवस्थामा, एक कार्य को एक संशोधित योजना को लागी आउनु पर्छ।
प्रतिबन्धित: यो कुनै फिर्तीको बिन्दु होइन। कुनै निलम्बन अपीलले तपाईंलाई बचत गर्न सक्दछ यदि तपाईंको खातामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने।
एक अमेजन सस्पेंशन प्रारम्भिक दुई मा सारांश गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंको खाता निलम्बित गरिएको छ वा तपाईंको अपील अस्वीकृत गरिएको छ। यसको सरल अर्थ भनेको यो छ कि अमेजनले तपाइँलाई केहि परिवर्तन गर्न र तपाइँको सेवाहरू सुधार गर्न चाहन्छ।
तर, यदि तपाईं प्लेटफर्मबाट प्रतिबन्धित हुनुहुन्छ जुन वास्तवमा डार्क जोन हो भने त्यहाँ कुनै पुन: पुन: आगमन छैन। कसैले नयाँ खाता खोल्ने सोच्न सक्छ तर त्यो वास्तवमा अमेजनको नीतिहरूको बिरूद्ध हो। यसको मतलव तपाईको खाता फिर्ता लिने कुनै वास्तविक तरीका छैन। जे होस्, यो मात्र सबै भन्दा नराम्रो गतिविधिहरूका लागि हुन्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं अन्जानमा यस लुपमा हुनुहुन्छ भने सम्भावनाहरू यो हुन्छ कि तपाईं त्यस स्तरमा पुग्न सक्नुहुन्न। र त्यो वास्तवमै एक प्रभावकारी अमेजन निलम्बन अपील प्रयोग गरेर निश्चित गर्न सकिन्छ।
अमेजन सस्पेंशनको लागि सब भन्दा सामान्य कारण
यदि हामी सर्त र अमेजनका सर्तहरू पढ्न थाल्छौं भने यसले केहि समय लिनेछ र धेरै भ्रममा पार्नेछ। अमेजन सबैभन्दा ठूलो ईकॉमर्स प्लेटफर्म हो धेरै नियम र नियमहरूको पालना गर्न सोध्छ। यही कारण हो कि समयको साथ अमेजन निलम्बन अपीलहरूको संख्या बढेको छ। वास्तवमा, हामीले व्यक्तिगत रूपमा अमेजन निलम्बन अपीलको लागि हामीलाई पुग्ने व्यक्तिहरूको संख्यामा वृद्धि देख्यौं। यदि हामी अमेजनको ह्यान्डबुकमा जान्छौं भने त्यहाँ थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। तर, ती सबैलाई तीनमा समेकित गर्न सकिन्छ:
सबै भन्दा सामान्य कारण नीतिहरूको उल्ल policies्घन हो अमेजन तपाईंलाई अनुसरण गर्न भन्छ। यदि तपाईं सक्रिय हुनुहुन्न भने संभावना तपाईं नीति उल्ल .्घनमा हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको व्यवसायले गहिरो गोता लगाइरहेको छ। अमेजन विक्रेताहरू मनोरञ्जन गर्न चाहँदैनन् जो गरीब बिक्री छन्। धेरै जसो समय, त्यहाँ किन यस्तो ठोस कारणहरू छन्? र यदि तपाईं यसको बारे सचेत हुनुहुन्छ भने निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यसलाई ठीक गर्नुभयो।
प्लेटफर्ममा अनुमति नभएको उत्पादन बेच्न। यो आईपी नीतिहरू उल्ल products्घन गर्ने उत्पादनहरूको साथ पनि हुन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: अमेजन विक्रेता खाता निलम्बन कारणहरू
हामी कसरी अमेजन निलम्बन को विषय भेट्टाउछौं?
हाम्रो टाउको यहाँ र त्यहाँ सञ्चालन बिना नै त्यसो गर्ने उत्तम तरिका भनेको अमेजनद्वारा पठाइएको सूचना जाँच गर्नु हो। यदि तपाईंको खाता पहिलो पटक निलम्बित गरिएको छ भने प्रायः तपाईंले यसमा ध्यान दिनुहुन्न। तर, अमेजनले तपाइँको गल्ती औंल्याउन निश्चित गर्दछ र जहाँ हामी मद्दत गर्ने प्रयास गर्छौं।
अमेजनद्वारा पठाइएको सूचना मार्फत हामी तपाईंको विक्रेता खातालाई अनुकूलित अमेजन निलम्बन अपील सिर्जना गर्न हाम्रो काम शुरू गर्दछौं।
अमेजन विक्रेता खाता निलम्बन कसरी रोक्न सकिन्छ?
अमेजन निलम्बन अपील लेख्नु एक अनावश्यक गडबडी हो जब एक व्यक्ति निलम्बनबाट टाढा रहन्छ। हामी एक अमेजन निलम्बन अपील सेवा हौं तर हामी ग्राहकलाई निलम्बन रोकथामको फाइदा पनि प्रदान गर्दछौं।
तपाइँको खातालाई निलम्बन गर्दै र यसलाई पुनःस्थापित गर्नु सामान्य लाग्न सक्छ। तर, के हुन्छ जब तपाईंले ती दुई दिनको लागि आफ्नो व्यापार हराउनुभयो। वास्तवमा, यसले तपाइँको विश्वसनीयता र प्रणालीमा उत्पादन रैंकिंगलाई पनि तोड्न सक्दछ। यसका साथै समयको लागि तपाईंको पसल बन्द छ जसको मतलब तपाईंले कुनै पैसा कमाउनु हुन्न।
हामी प्लेटफर्ममा तपाईंको गतिविधिमा ध्यान दिन्छौं र तपाईंलाई मार्गनिर्देशन गर्दछौं। हामी प्रयास गर्छौं कि तपाईं कुनै पनि दुर्भावनापूर्ण गतिविधिमा फँसेको छैन, यो जानेर होस् वा अन्जानमा। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, धेरै ग्राहकहरू लाग्छ कि उनीहरू गडबडी गर्न सक्छन् र हामी जस्तो कसैलाई काममा लगाउन सक्छन्। तर, यसले सधैँ हामीले चाहेको जस्तो काम गर्दैन खास गरी यदि ग्राहकले उस्तै गल्ती दोहोर्याइरहेको छ। हामी यो निश्चित गर्दछौं कि तपाईं गलत हुनुहुन्न र ट्र्याक राख्नुहुन्छ जसले गर्दा विक्रेता खाता स्वास्थ्य रहिरहन सक्छ र ग्राहकहरू कुनै पनि अमेजन निलम्बन अपीलबाट बच्न सक्छन्।
हामी कसरी अमेजन निलम्बन को लागी एक अनुकूलित कार्य को योजना बनाउँछौं?
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन प्रत्यक्ष कार्य गर्नु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, अमेजन द्वारा निलम्बन पठाएको अधिसूचना जाँच गर्दै। विक्रेता मेट्रिक्स जाँच गर्दैछ कि तपाईंको खाताले यस अवधिमा कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ।
हाम्रो मौका राम्रो बनाउन र एक उचित बनाउन को लागी कार्य योजना (POA), हामी सकेसम्म गहन हुन को लागी प्रयास। र, हामी पनि क्षमाप्रार्थी हुन कोसिस गर्छौं, यो एक कीवर्ड हो जुन वास्तव मा शक्तिशाली हुन सक्छ।
ठिकै छ, हामी यो धेरै सभ्य संख्यामा गरेका छौं। हामीलाई दिइएको सबै कुरा बुझिसके पछि, योजना बनाउने प्रयास गर्नुहोस् जसले यी मुख्य तत्वहरूलाई सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दछ:
हामी तपाइँको तर्फबाट भएको कुनै पनि क्षतिको लागि जिम्मेवारी लिन्छौं। यो प्लेटफर्म वा ग्राहक वा दुबै हो।
तस्विर बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस् जहाँ हामी उनीहरूलाई लाग्दछौं कि अमेजन जस्तो मञ्च प्राप्त भएकोमा यो कृतज्ञ छ। र यो वास्तवमै अवसर हो जुन हामी गडबडी गर्न चाहँदैनौं।
कुनै पनि अन्य विक्रेता उत्पादन वा तिनीहरूको सेवाहरूको आलोचना नगर्नुहोस्। अमेजनले यो कारणले लिन्छ तर उल्लंघनमा हुने जो कोहीलाई निलम्बन गर्दछ।
र जस्तै हामीले भनेका "apologetic" कुञ्जीशब्द हो।
अन्य महत्त्वपूर्ण सल्लाहहरू
यी चापलुसी जस्तै लाग्न सक्छ तर मलाई विश्वास गर्नुहोस् यो सब शालीन अर्थमा सही छ। अमेजन वास्तवमा ईमानदार व्यापार को लागी धेरैलाई एक प्लेटफार्म प्रदान गरेको छ। यसले उनीहरूलाई पर्याप्त अवसरहरू प्रदान गर्दछ जो उनीहरूको ब्यापारको उत्तम बनाउन चाहन्छन्। जहाँसुकैबाट तपाईका साथी ग्राहकहरूलाई सिधै बेच्न सक्ने क्षमता केहि हो जुन कोहीको लागि इच्छुक थियो। र अब जब यो एक वास्तविकता हो कृतज्ञ हुनुको सट्टा, धेरै विक्रेताहरू केवल छोटो अवधिको लक्ष्यका लागि यसको शोषण गर्न प्रयास गर्छन्।
ठीक छ, एक पटक हामीले सभ्य अमेजन निलम्बन अपील निर्माण गर्न सबै डाटा एकत्रित गरेपछि हामी हतार गर्दैनौं। यो आवश्यक छ कि अमेजनमा पठाइएको जुनसुकै गुणवत्ताको हो। यो थोरै संदिग्ध देखिन्छ तर वास्तविकता यो हो कि यदि तपाईंले आफ्नो पहिलो प्रयास हराउनुभयो भने पुनर्स्थापनाले वास्तवमै पूरै धेरै समय लिन सक्दछ।
अन्य आवश्यक अवयवहरू हामी उचित अमेजन सस्पेंशन अपील निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछौं।
हामी केवल नीतिहरू र हाम्रो अधिकार के हो भनेर कुरा गर्न प्रयास गर्दछौं। त्यहाँ प्रदर्शन मेट्रिक्स को बारे मा कुरा गर्न कुनै कारण छैन जब तपाइँ निलम्बित छन्। यहाँ सम्म कि यदि तपाई ब्लाईडि numbers नम्बरहरू दिँदै हुनुहुन्छ, यसको मतलब केहि पनि होइन खास गरी यदि चिन्ता फरक छ भने।
हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हामीलाई पठाएको पत्र प्रकृतिमा लामो छैन। लम्बाई सामग्री पचाउनको लागि समय लिन्छ र त्यसैले छोटो र कुरकुरा अमेजन अमेरीकन निलम्बन अपिल लेख्नको लागि उत्तम तरिका हो।
स्पष्टीकरणको लामो अनुच्छेद प्रयोग गर्नुको सट्टा, हामी बुलेट पोइन्ट र नम्बरहरू प्रयोग गरेर हाम्रो अमेजन निलम्बन अपीललाई संरचना गर्ने प्रयास गर्दछौं। यो एक सानो सम्झौताको जस्तो लाग्न सक्छ तर यसले तपाईंको बनाउँछ अमेजन अपील पत्र नियुक्त गरिएको अमेजन विशेषज्ञलाई अधिक स्क्यान गर्न सक्ने तरीका।
हामी कुनै थप जानकारीलाई बेवास्ता गर्ने र ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको मुद्दामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दछौं। यसले अन्यत्र अनावश्यक ध्यान खिच्दैन।
हाम्रो कामको सुरुवात हातको समस्या हो। कसैलाई दोषारोपण गर्ने कुनै पनि खेल खेल्नुको सट्टा, हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि अमेजनलाई थाहा छ कि हामी हाम्रो अपराध बुझ्दछौं र यसलाई ASAP ठीक गर्नेछौं, र यसलाई कहिले पनि दोहोर्याउँदैनौं।
अर्को ठूलो टिप्स, हामी प्राय: प्रयोग गर्छौं एक परिचयात्मक अनुच्छेद लेख्नु जुन सब थोरैमा सबै वर्णन गर्दछ। यो अनुपात भन्दा अलि बढी देखिन्छ तर यसले जादू जस्तो कार्य गर्दछ। अमेजन निलम्बन अपील बनाउँदा यी धेरै उपयोगी सल्लाहहरू हुन्। र, यो सामान्य रूपमा हामी भित्र खेल्ने ढाँचा हो तर यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हातमा रहेको समस्याले मात्र यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने निर्णय गर्दछ।
हामी किन बिक्रेताहरूलाई सस्पेंशन अपीलको लागि पेशेवर जान सुझाव दिन्छौं?
ठिक छ, यो अलि अनौंठो लाग्न सक्छ तर भावनाहरू एउटा ठूलो कारण हुन सक्छ तपाईको बहालीलाई लामो समय लाग्न सक्छ। हामी दैनिक आधारमा ग्राहकहरू भेट्छौं जसले इमान्दार भई प्लेटफर्ममा काम गरिरहेका छन्। यद्यपि, तिनीहरूको खाता निलम्बन भयो किनकि तिनीहरू सचेत थिएनन वा केवल यस विभागमा पर्याप्त सक्रिय छैन।
वास्तवमा, हामी तपाईंलाई क्लाइन्टहरूको बारेमा बताउन सक्छौं जसले केवल अमेजनको सूचनालाई वेवास्ता गर्थे किनभने उनीहरूले प्रयोगकर्ता समीक्षाको कारण उनीहरूको एउटा उत्पादन बेच्न बन्द गरे। यद्यपि उनीहरूले केहि गर्न सक्नु भन्दा पहिले, अमेजनले तिनीहरूको खाता निलम्बित गर्‍यो।
प्लेटफर्ममा धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले उनीहरूको व्यवसाय निर्माण गर्न यति धेरै समय दिएका छन्। यो सबै एकै पल्ट मा दूर ले धेरै को लागी धेरै हुन सक्छ। र, यो आफैलाई रचनामा राख्न महत्त्वपूर्ण छ। र, निलम्बनमा तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया टोली हुनुको अलावा, हामी यो सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाईं पहिलो स्थानमा निलम्बन हुनुहुन्न। हामी @ एप्प्लस ग्लोबल ईकॉमर्स विश्वासको आवश्यकता परेको खण्डमा हामी आफ्नो ग्राहकहरुसँग साझेदार बन्छौं। उनीहरूको फस्टाउने व्यवसाय हाम्रो सफलता हो।
अमेजन निलम्बन लेख्नबाट बच्नको लागि हाम्रो अन्तिम सल्लाहहरू
हो, हामी एक सेवा हो र हामी व्यापार प्राप्त गर्न मन पराउछौं। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले हाम्रो साथी अमेजन विक्रेताहरूलाई सहयोग गर्न प्रयास गर्नु हुँदैन। हामीसँग फरक ट्रेड हुन सक्छ तर हामी तपाईको समस्या बुझ्दछौं। र त्यहाँ धेरै सेवाहरू छन् जबकि सबैले आफैंको लागि अपील गर्न प्रयासमा एक उचित शट दिने सोच्दछन्। त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन भन्न सकिन्छ तर यो सँधै निलम्बन नगर्न उत्तम हुन्छ। त्यसो गर्न त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ।
कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्धित वस्तुहरू बेच्नबाट जोगिनुहोस्।
त्यहाँ धेरै विक्रेताहरू छन् जसले त्यसो गरिरहेको हुन सक्छ तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले गर्नु पर्छ। अमेजन विशेष रूपमा यसको बिरूद्ध यसको विक्रेताहरु लाई निर्देशन दिन्छ। तसर्थ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले सावधानीपूर्वक सुन्नुभयो यदि तपाईं अमेजन निलम्बन अपीलबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने।
बेच्न कोसिस गर्नुहोस्
उत्पादनहरू जुन तपाईंलाई शंकास्पद लाग्न सक्छ। यदि तपाईले बिक्री गरिरहनु भएको उत्पादन केहि उपकरण वा यसको कार्यक्षमताको नक्कल जस्तो देखिन्छ भने, केवल त्यस उत्पादनको जरा जान्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै मानिस छन् जसले आईपी उल्लंघन नीतिहरूको कारणले तिनीहरूको खाताहरू निलम्बन गर्दछन्। यति धेरै विक्रेताहरू तिनीहरूको खाता निलम्बन किन गरियो भन्ने प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो।
वकिलको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस्।
कोर्सको व्यवसाय चलाउनु भनेको तपाईले एक भन्दा बढि उत्पादनहरु बेच्न सक्नुहुन्छ। यसको सरल अर्थ यो हो कि यदि तपाइँ आफूले बिक्री गरिरहनु भएको उत्पादनको बारेमा केहि पनि अनौंठो महसुस गर्नुहुन्छ र त्यसो गर्न चाहानुहुन्छ भने परामर्श लिनु नै तपाइँले गर्न सक्ने उत्तम कुरा हो।
तपाईको समिक्षालाई नक्कल गर्नबाट बच्नुहोस्।
अमेजनमा समीक्षा तपाईको उत्पादको गुणस्तरको प्रमुख सूचक हो। अमेजनले कुनै पनि हालतमा तपाइँ उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न प्रयास गर्न चाहँदैन। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ ती समीक्षाहरू रचनात्मक रूपमा लिनुहोस् र केवल तिनीहरूको पालना गरेर तपाइँको सेवा सुधार गर्न सुरु गर्नुहोस्। ग्राहक समीक्षा पहिलो स्थान हो जहाँ एक इमानदार आलोचना र प्रशंसा को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाइँ त्यसो गर्न असफल हुनुभयो भने तपाइँ अमेजन निलम्बन अपीललाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाइँको वर्णन संग वफादार हुनुहोस्।
धेरै विक्रेताहरूले तिनीहरूको उत्पादनलाई फरक वर्णन गर्दछन् जबकि वास्तविक उत्पादन त्यो वर्णन सम्म छैन। यदि अमेजनले धेरै धेरै उजुरीहरू प्राप्त गर्दछन् भने तपाईं सम्भवतः स्वागत गर्दै हुन सक्नुहुन्छ अमेजन निलम्बन अपील.
एक अमेजन निलम्बन अपील प्राप्त गर्न को लागी हुन सक्छ सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुन सक्छ। यद्यपि, यदि तपाईं स्थिति ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने तपाईं पक्कै पनि हामीलाई तपाईंको समर्थनको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। उमेर को हिसाबले, हामी अझै nascent छौं तर अनुभव को मामला मा, हामीसँग धेरै अनुभवी अमेजन निलम्बन अपील विज्ञहरू छन्। हाम्रो कर्मचारीहरु को आला मा एक गहन अनुभव छ र क्षेत्रमा अनुभव वर्षौं छ। त्यो बाहेक अप्लस ग्लोबल ईकॉमर्स अन्य प्रस्ताव गर्दछ सेवाहरू जस्तै निलम्बन रोकथाम, खाता स्वास्थ्य जाँच, बिक्री बढावा, आदि। तसर्थ, यदि तपाइँ समर्थन गर्न कुनै व्यावसायिक सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामी सहयोगी हुन सक्छौं। हामी आशा गर्दछौं कि यो तपाईंको लागि केही सहयोगी हुन सक्छ। साथै, अन्त सम्म यो पढ्न को लागी धन्यवाद।
फेसबुक twitter Youtube इन्स्टाग्राम
642 XNUMX२ एन हाईलैंड एभ, लस एन्जलस,
हामी तपाइँबाट सुन्न चाहान्छौं!
twitter इन्स्टाग्राम फेसबुक-fYoutube
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ AplusGlobalEcommerce
हाम्रो विज्ञसँग कुरा गर्नुहोस्
नमस्ते, म तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु?